Tantara: Notsapain’Andriamanitra ny Finoan’i Abrahama - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Rehefa nihalehibe anefa i Isaka, dia notsapain’Andriamanitra ny ﬁnoan’i Abrahama. Niantso izy hoe: ‘Ry Abrahama ô!’ Ary namaly i Abrahama hoe: ‘Inty aho.’ Dia hoy indray Andriamanitra: ‘Ento ny zanakao, ny lahitokanao, dia i Isaka, ka mankanesa any amin’ny tendrombohitra iray izay hasehoko anao. Rehefa tonga any, dia vonoy ny zanakao lahy ary atero ho toy ny fanatitra.’
‘Aza mandratra ny zazalahy na manao na inona na inona aminy’, hoy Andriamanitra. ‘Fantatro izao fa manana ﬁnoana ahy ianao, satria tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao.’
Endrey ny haben’ny ﬁnoan’i Abrahama an’Andriamanitra! Nino izy fa tsy nisy zavatra tsy hain’i Jehovah, ary afaka manangana an’i Isaka amin’ny maty mihitsy aza i Jehovah. Tsy tena sitrapon’Andriamanitra anefa ny hamonoan’i Abrahama an’i Isaka. Nataon’Andriamanitra àry izay hisian’ny ondry iray voasaringotry ny kirihitrala teo akaiky teo, ary nilaza tamin’i Abrahama izy hamono izany ho fanatitra ho solon’ny zanany lahy.
Ahoana no nitsapan’Andriamanitra ny ﬁnoan’i Abrahama, araka ny hita eo amin’ny sary?
Nanao ahoana ny ﬁnoan’i Abrahama an’Andriamanitra?